Khuphela i-Oneplus 6T yesiqalisi, iNkqubo yeMozulu kunye neGalari | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukuba unesiphelo sendlela ye-Android kwaye ufuna ukuyiguqula ibe yi-Oneplus 6T, enkosi Izibuko le-Oneplus 6T endibonisa apha ngezantsi ngokunjalo Imozulu zemozulu, Ungaze uLungelelanise iwijethi kunye negalari yezithombe Uza kuyiphumeza ngendlela elula kakhulu.
Ngokomgaqo, ekuphela kwemfuneko kukuba nesiphelo I-Android ene-Android 8.0 ukuya phambili, kwaye kukuba i-Oneplus 6T Launcher ifuna le nguqulelo iphantsi ye-Android ukuba ifakwe.
Ke khumbula: Ukufaka i-Oneplus 6T Launcher kuyo nayiphi na i-Android oya kuyidinga ubuncinci benguqulo ye-Android Oreo 8.0. Ngelixa ufaka usetyenziso lwemozulu, iWidget ayisoze yahlala kunye negalari uyakufuna inguqulelo ye-Android 5.0 okanye engaphezulu.
Nje ukuba siqwalasele ezona mfuno zisezantsi zibekiwe ngasentla, singadlulela kwi khuphela kwaye ufake usetyenziso oluyimfuneko lokushiya i-Android yakho emfanekisweni nasekufaneni kwe-Oneplus 6T njengoko ndikubonisa kwividiyo ukuba ndikushiye kanye ekuqaleni kweli nqaku.
1 Khuphela usetyenziso lwe-Oneplus 6T
1.1 Khuphela usetyenziso lwe-Oneplus 6T kwiforum yaseburhulumenteni ye-XDA
2 Kodwa, ndizifaka njani ii-apk ezikhutshelweyo?
Khuphela usetyenziso lwe-Oneplus 6T
Emva koko ndishiya ii-apks ezifanelekileyo zokukhuphela kunye nokufaka usetyenziso olufanelekileyo kwi yenza i-Android yethu ibe yi-Oneplus 6T, Ubuncinci ngokubhekisele kwinkangeleko !!
Khuphela usetyenziso lwe-Oneplus 6T kwiforum yaseburhulumenteni ye-XDA
Kule khonkco siza kukhuphela i-Oneplus 6T Launcher kunye newijethi yemozulu.
Kule khonkco siza kukhuphela usetyenziso lwemozulu kunye negalari yezithombe ze-Oneplus.
Ukuba ukhetha ukuyikhuphela ngqo ngaphandle kwengxaki ezininzi kwaye ungumsebenzisi we Uluntu lwe-Androidsis kwiTelegram, emva koko unokuzikhuphelela zonke iiapks ngokuthe ngqo ngokungena nje ekuhlaleni ngokunqakraza kwikhonkco elilandelayo:
Khuphela zonke iiapks kuLuntu lwe-Androidsis kwiTelegram ngokucofa apha
Nje ukuba ii-apk zikhutshelwe, ukuze ube neengxaki zokuzifumana, ndikucebisa ukuba ucofe kumanqaku amathathu efayile nganye kwaye xelela iTelegram ukuba igcine kwifolda yokukhuphela ye-Android yakho, Ifolda yokukhuphela.
Kodwa, ndizifaka njani ii-apk ezikhutshelweyo?
Ukufaka ii-apk ezikhutshelwe ngaphambili kuya kufuneka siye kuseto lwe-Android yethu kwaye ukhethe usetyenziso esiza kufaka kulo ezi apk ikunike iimvume ezivela kwimithombo engaziwayo okanye kwimithombo yolwazi.
Kule khokelo yokufundisa oyenzileyo ngexesha elidlulileyo Ndikuchaza ngokweenkcukacha indlela yokwenza imithombo engaziwayo zombini kwi-Android Oreo nakwiinguqulelo zangaphambili ze-Android.
Ukuba xa ufaka i-Launcher uneengxaki zokuvalwa ngokunyanzelekileyo njengoko kwenzekile kum kwi-Huawei P20 PRO, ungakhathazeki kuba ndiza kukushiya ividiyo engezantsi apho ndicacisa khona ngokubanzi Ungayisombulula njani le ngxaki yokuvalwa ngokunyanzelwa xa ufaka nasiphi na isiqalisi kwisixhobo sethu.
Ividiyo ijolise lungisa imiba yokuvala ngenkani kunye neNova Launcher nangona ikwayinkqubo efanayo yesiqalisi kunye nezinye iziqalisi ezisibonisa ngale ngxaki.
Nje ukuba kwenziwe konke oku, uya kuba nakho I-Android yakho ijongeka intle njengoko i-Oneplus 6T entsha isenza. Umzekelo, ividiyo endikushiye kuyo ekuqaleni kwesi sithuba apho ndilungisa khona iHuawei P20 Pro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungayiguqula njani i-Android yakho ibe yi-Oneplus 6T
IXiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer kunye neMi MIX 2S zifumana umsebenzi wekhamera 'Imowudi yasebusuku' kwi-beta evaliweyo